Amniga meesha uu yaallo maydka Kim Jong-nam oo aad loo adkeeyay | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Amniga meesha uu yaallo maydka Kim Jong-nam oo aad loo adkeeyay
Amniga meesha uu yaallo maydka Kim Jong-nam oo aad loo adkeeyay
Amniga meesha lagu keydiyay maydka Kim Jong-nam, oo ka mid ah magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, ayaa si aad ah loo adkeeyay.
Kim ayay isku aabo ahaayeen hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un.
Kim wuxuu dhintay isbuucii la soo dhaafay, waxaana loo maleynayaa in la sumeeyay xilli uu sugayay inuu diyaarad ka raaco garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in wiilkiisa Kim Han-sol uu u safray Malaysia si uu maydka u soo qaato.
Waxaa sidoo kale sare u kacay qilaafka diblumaasiyadeed ee ka dhexeeya Malaysia iyo Kuuriyada Woqooyi.
Khilaafka wuxuu imaaday ka dib markii Malaysia ay diiday dalab kaga imaaday safaaradda Kuuriyada Woqooyi oo ahaa in maydka lagu wareejiyo.
Malaysia waxay dalbatay in dhiigga Hida-sidaha ee DNA-ga la baaro si loo aqoonsado ka hor intaan la wareejin maydka.
Waxaa jiro baaritaan la sameeyay oo ah sida uu u dhintay Kim Jong-nam. Natiijada ayaa la filayaa in isbuucan la shaaciyo.
Arrintaas ayaa sababtay in danjraha Pyongyang ee Malayshiya Kang Chol in uu Kuala Lumpur ku eedeeyo in ay “wax qarinayso”
Arrintaas ayaana sababtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Malayshiya ay si caro leh uga jawaabto iyada oo sheegtay in eedayntaasi “aysan sal lahayn”. waxayna intaas ku dartay in ay masuuliyadooda tahay in ay baaraan dhimashada Kim maadaama oo uu Malayshiya ku dhintay.
Muxuu mudanayaa maydka Kim ?
Xukuumadda Malayshiya waxay hadda sugaysaa natiijada ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyay maydka.
Balse danjire Kang Chol ayaa sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin natiijada maadaama oo baaritaanka la sameeyay iydoo aysan joogin cid ka socota Waqooyiga Kuuriya.
Title: Amniga meesha uu yaallo maydka Kim Jong-nam oo aad loo adkeeyay